Success and Value | အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Posted on9September 2010 by lettwebaw
အခုတစ်ခါ ဖောက်သည်ချပေးချင်တဲ့ သက်ကြီးစကားကတော့ နှိုင်းရအယူအဆကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အဲ(လ်)ဘာ့(ထ်) အိုင်း(န်)စတိုင်း(န်)ရဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။
သူ့စကားကို မပြောခင် သူ့အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းလောက် ပြန်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
သူ့ကို ၁၈၇၉ ခုနှစ်က ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်၊ ၁၉၀၅ ခုနှစ်မှာ Relativity Theory လို့ ခေါ်တဲ့ နှိုင်းရအယူအဆကို သူက ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အယူအဆကနေ ဒြပ်ထုနဲ့ စွမ်းအင်တို့ရဲ့ အဆက်အစပ် ပုံသေနည်းကို သူက ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ပုံသေနည်းကြောင့် အဏုမြူစွမ်းအင်ကို လူတို့ သိလာခဲ့ကြတာပါ။
အိုင်းစတိုင်းကိုယ်တိုင်က စစ်ရေးမှာ အဲဒီ့အဏုမြူစွမ်းအင်ကို သုံးနိုင်တာတွေကို ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ အဏုမြူ လက်နက် ဆန့်ကျင်ရေး စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၅ ခုနှစ် အသက် ၇၆ နှစ် အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကနေ့ လူတို့ အသုံးပြုနေကြတဲ့ အလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း အတော်များများရဲ့ဖခင်ကြီးလို့တောင် အများက သူ့ကို သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ သူသာ မရှိခဲ့ရင် ရုပ်သံလည်း ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်၊ ကွန်ပျူတာလည်း ပေါ်လာမှာမဟုတ်၊ အင်တာနက်လည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တောင် ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောနိုင်တဲ့အထိ သူ့ရဲ့ စတင် တွေ့ရှိ ဖော်ထုတ်မှုက လူသားတွေအတွက် အကျိုးများစေခဲ့သလို အဏုမြူ လက်နက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာလည်း သူ့ကြောင့်ပဲလို့ ဆိုနိုင်ပြန်တယ်။
ကဲ… သူပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးကို ပြန်ပြောပြမယ်နော်။
အောင်မြင်မှုတစ်ခုရလာအောင် မကြိုးစားပါနဲ့။ အဲသလို ကြိုးစားမယ့်အစား တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါ တဲ့။ အိုင်း(န်)စတိုင်း(န်)က အဲသလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
Try not to becomeasuccess, rather try to becomeaman of value. တဲ့။
ဆက်မဖတ်ခင် သူ ပြောတာလေးကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားကြည့်တော်မူကြပါဦးလားခင်ဗျာ။ အောင်မြင်မှုရတဲ့သူနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ ကြားမှာ ဘာတွေ ကွာခြားသလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ ကွဲပြားသလဲ၊ ဘာက ကိုယ့်အတွက် ပိုကျေနပ်စရာကောင်းသလဲ စသဖြင့် သေသေချာချာ အလေးအနက် စဉ်းစားကြည့်တော်မူကြစေချင်ပါတယ်။
“အောင်မြင်မှု”ဆိုတာတော့ လူတိုင်းလိုချင်ကြတာပဲ။ ခင်ဗျားလည်း လိုချင်တယ်၊ ကျွန်တော်လည်း လိုချင်တာပဲ၊ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။
ဒါပေသည့် အဲဒီ့အောင်မြင်မှုကို ရဖို့ဆိုတဲ့ ဇောလေးတစ်ခုတည်းကို ရှေ့တန်းတင်၊ ထင်ရာစိုင်းရင်းကနေ ကိုယ်ဟာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့သူ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ဖြစ်လာတာကျတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ်။ အောင်မြင်မှုမှာ သာယာ ယစ်မူးနေဟန်နဲ့ ဖုံးဖိထားရတတ်တယ်။
လူတွေဟာ အောင်မြင်မှုကို ဘာနဲ့ တိုင်းတာလေ့ရှိကြသလဲ။ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ တိုင်းတာတဲ့သူရှိတယ်၊ အဆင့်(နေရာ)နဲ့ တိုင်းတာတဲ့သူ ရှိတယ်။ သည်နှစ်မျိုးပဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ အဆင့်ဆိုရာမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုလည်း ပါဝင်သလို အသိဉာဏ်ပညာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ အသိကြွယ်တာ၊ အသိဉာဏ် အဆင့်အတန်း ရှိတာကိုလည်း တချို့က အောင်မြင်မှုရယ်လို့ သတ်မှတ် တိုင်းတာတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာရာမှာ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ အဆင့်ဆိုတဲ့ ရေချိန်နှစ်မျိုးသာ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်က ယူဆလိုက်တာပါ။
ရုပ်ဝတ္ထု (ဝါ) ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝမှုနဲ့ တိုင်းတာတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရယူနေသူတွေ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ လူတိုင်းဟာ တန်ဖိုး ရှိတဲ့လူလားဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော် မူလိုက်ပါဦး။
ကျွန်တော့်ကား ပြင်နေကျ စက်ဆရာက တကယ့် စက်ပြင်ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ သူ့ဆီမှာ လာအပ်တဲ့ ကားထဲမှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကျွန်တော့်ကားက အဆင့်အနိမ့်ဆုံး၊ အစုတ် ဆုံး။ တကယ်တမ်း သူ့ဆီအပ်တဲ့ကားတွေဟာ အဖျဉ်းဆုံး ၁၉၉၈ ခုနှစ် ထုတ်ပဲ။ အများစုက ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်နဲ့ နောက်ပိုင်းထုတ် အပျံစားကားတွေ။ သိန်းကို ထောင်ချီပြီး တန်တဲ့ကားတွေ။
အဲဒီ့ကားတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် သူကြွယ်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မြောက်များလှစွာသော ကားတွေလည်း ပါတယ်။ သူကြွယ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဲဒီ့ စက်ပြင်ဆိုင်ကို ဘယ်လာအပ်ပါ့မလဲ။ သူ့ယာဉ်မောင်းတွေက လာအပ်တာပါ။
အဲဒီ့ ယာဉ်မောင်းတွေဟာ သူကြွယ်ကြီးရဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေပီပီ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်၊ သားသားနားနား ဝတ်စားထားကြတယ်။ မျက်နှာထိ၊ မျက်နှာထားကအစ သူတို့ရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေဟာ အသားလွတ်ကို မောက်မာနေကြတယ်။
စက်ပြင်ဆရာဆီက သိလာရတာတစ်ခုက အဲဒီ့ယာဉ်မောင်း တစ်ယောက်စီ တစ်ယောက်စီဟာ သိန်း ၂၀ ကနေ သိန်း ၃၀ အတွင်းမှာ စုမိ၊ ဆောင်းမိဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့ အကြောင်း။
ဟာ… သည် သူကြွယ်ကြီးက တယ်တော်ပါလား။ ကိုယ့်ယာဉ်မောင်းတွေကိုတောင် အဲသလောက်အထိ မြှောက်စားပါလားလို့ မတွေးလိုက်ကြပါနဲ့။ မဟုတ်ပါဘူး။ သူပေးထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလခက သူလိုငါလို နှစ်သောင်းခွဲ၊ သုံးသောင်းပါပဲ။ နို့… သူတို့က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိန်းကို ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ ချီလို့ ရနေကြတာလဲ။
အဖြေက ရှင်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ မောင်းနေရတဲ့ ကားအပေါ်မှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အမြတ်ထုတ်ပြီး “အောက်ဆိုက်”လို့ ခေါ်တဲ့ အပိုဝင်ငွေ ရှာနေကြတာပါ။ ဓာတ်ဆီကို လိုသည်ထက် ပိုပြီး တောင်းတယ်။ ကားပြင်တဲ့အခါ စက်ပြင်ဆရာကို ကျသင့်ငွေ ပိုရေးခိုင်းတယ်။ ကားပစ္စည်း ဝယ်တဲ့အခါ ကားပစ္စည်းဆိုင်ကို ဈေးပိုတင်ပြီး ပြေစာဖြတ်ခိုင်းတယ်။ နည်းမျိုးစုံနဲ့ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင် သူကြွယ်ကြီးဆီက ပိုက်ဆံတွေကို မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ရယူနေကြပါတယ်။
သူ့မိသားစု၊ သူ့ဘဝ၊ သူ့ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ သူဟာ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ ဝါလို့ ရကောင်းရနေလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့ဟာ အောင်မြင်တဲ့သူတွေလို့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လိပ်ပြာက တကယ် စင်ကြယ်ရဲ့လား၊ တကယ် သန့်ရှင်းရဲ့လား။
သူတို့စိတ်ထဲမှာ အလွယ်တကူ ရှိနေနိုင်တာလေး တစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ်။ “ငါ မလုပ်လည်း၊ ငါ့ အလုပ်ရှင်အပေါ် တခြားလူတွေက သည်လိုပဲ လုပ်နေမယ့် အတူတူတော့ ငါလည်း လုပ်လိုက်တာ တရားပါတယ်”ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးပါ။
အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ကလီရှေး (cliché) ကို သုံးရင်တော့ “မိုးခါးရေ”ပေါ့။ အများသောက်နေတဲ့ အတူတူ ကိုယ် သောက်လို့လည်း ဘာမှ မထူးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ပေါ့။
သည်နည်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ငွေကြေးအောင်မြင်မှုကို ရယူတယ်။ ကြွယ်ဝမှုကို ရယူနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာ တန်ဖိုး ရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာကြမှာလား။ အတော်လေး စဉ်းစားစရာ ကောင်းပါတယ်။
တခြားမကြည့်နဲ့၊ သူတို့နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ စက်ပြင်ဆရာကတောင် သူတို့ကို အထင်ကြီး၊ လေးစားမှု မရှိဘူး။ စက်ဆရာက ဟောက်ရင် သူတို့တွေ ငြိမ်ခံနေကြရတယ်။ ဘာလို့လဲ၊ သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ ဟာကွက်၊ ပျော့ကွက်တွေကို စက်ဆရာက တိတိပပ သိထားပေတာကိုး။ တစ်နည်းပြောရရင် သူတို့ဟာ တန်ဖိုးမဲ့သူတွေလို့ စက်ပြင်ဆရာက သတ်မှတ်ထားတာကိုး။
သည်အထဲမှာမှ နောက် ယာဉ်မောင်းကြီးတစ်ယောက် ရှိသေးတယ်။ သူကကျတော့ စောစောက ပြောတဲ့ သူကြွယ်ကြီးလောက် မချမ်းသာပေမယ့် သူလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ကြွယ်ဝတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ ယာဉ်မောင်းပါ။ အဲဒီ့ ယာဉ်မောင်းကြီးကကျတော့ အစစ အရာရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် တိတိကျကျ လုပ်တယ်။ သူ့ကို ပေးထားတဲ့ လုပ်ခလစာအပြင် ဘာကိုမှ ပိုမယူဘူး။
စက်ဆရာက ပြောပြဖူးတယ်။ ကားလာပြင်စတုန်းက “အစ်ကိုကြီးအတွက် ပြေစာမှာ ပိုရေးပေးရမလား”လို့ စက်ဆရာက မေးဖူးသတဲ့။ “မလုပ်ပါနဲ့ မောင်ရာ။ အမှန်အတိုင်းပဲ ရေးပါ။ သူများပိုက်ဆံကို အဲဒီ့နည်းနဲ့ မလိုချင်ပါဘူး။ ကျုပ်မှာ မရှိရင် ရိုးရိုးသားသား ပြောပြပြီး လက်ဖြန့် တောင်းချင်တောင်းမယ်၊ မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့တော့ တစ်သက်လုံး မယူပါဘူး။ သူ့ကျွေး ရှိလို့ သူ့ဆီမှာ အခစား လုပ်နေရတာနဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ။ နောက် ဘဝမှာ သူ့မြေ ပါသွားမယ့်အလုပ်တွေ မလုပ်ပါရစေနဲ့”လို့ ယာဉ်မောင်းကြီးက ပြန်ပြောသတဲ့။
စက်ဆရာက အဲဒီ့ နွမ်းနွမ်းပါးပါး ယာဉ်မောင်းကြီးကို အမြဲတန်း လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတယ်။ သူ ကားလာပြင်တဲ့အခါ စက်ဆရာကတောင် အဲဒီ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဇွတ်အတင်း လက်ဖက်ရည်တိုက်တာ၊ ထမင်းကျွေးတာတွေ မြင်ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာကို စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများ မြင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
တချို့ရှိသေးတယ်။ အလုပ်ကို တော်တော်နဲ့ မလုပ်ဘဲ ပညာ ပြနေတာ၊ အလုပ် လာအပ်သူဆီက အပိုကြေးလေး ထွက်လာအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ညှစ်ထုတ်နေကြတာတွေ ရှိတတ်တယ်။ အညှစ်ခံရမှန်း သိပေမယ့် မလုပ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ပေးလိုက်ကြရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သဒ္ဓါကြည်ဖြူစွာ ပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကို သိသိကြီးနဲ့ မြိန်မြိန့်ကြီး ယူငင်စားသုံးတာဟာ အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဟုတ်သလိုလို ရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်မှာ အဲသလို ပညာပြဖို့၊ ညှစ်ထုတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရှိတော့တဲ့ အချိန်ဆိုတာ အနှေးနဲ့ အမြန်တော့ ရောက်လာတော့မှာပဲ။ အဲဒီ့အခါကျတော့ သူ့ကို ဘယ်သူက သဒ္ဓါတော့မလဲဆိုတာ အင်မတန် စဉ်းစားစရာ ကောင်းလှတယ်။
သူ့နေရာမှာ လာသမျှကို စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ပေးခဲ့သူကို ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။ စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ပေးမှန်းသိတဲ့အခါ အလုပ် လာအပ်သူတွေက ရက်ရက်ရောရော ကူညီ ပေးကမ်းကြတယ်ဆိုပါစို့။ သူကလည်း ရမှန်းတော့ သိသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ရရကောင်းစေ မအောက်မေ့ဘဲ ဘယ်သူ့ကိုမဆို စေတနာ အပြည့်နဲ့သာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးမြဲ ပေးနေမယ် ဆိုရင် အဲဒီ့လူ ဘယ်ဘဝ ရောက်သွားသွား ပူပင် ကြောင့်ကြစရာ မလိုတော့ဘူး။
အဲဒီ့မှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ လူ့တန်ဖိုးရဲ့အလေးအပေါ့ ကွာခြားမှုကို အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သိပ်ရှည်မှာစိုးလို့ သည်အပိုင်းကို အကျယ်ထပ်မချဲ့တော့ပါဘူး။ ပြမယ်ဆိုရင်တော့ နမူနာတွေ အများကြီးပါပဲ။ စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများ ကိုယ်တိုင် အလေးအနက် တွေးကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
အဆင့်နဲ့ တိုင်းတာတဲ့ အောင်မြင်မှုကိုပဲ ပြောကြည့်ကြပါဦးစို့။
ကိုယ့်အဆင့် တက်လာဖို့အတွက် သူတစ်ပါးကို နင်းသွားတာဟာ အောင်တော့ အောင်မြင်ပါရဲ့၊ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အောင်မြင်မှု မဟုတ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
အထင်ရှားဆုံး ဥပမာပြရရင် ကျော်ဆွေ့ကို နင်းပြီး တက်လိုက်လို့ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ ကောလိပ်ဂျင် နေဝင်း ကွယ်လွန်သွားလို့ ကျော်ဟိန်း ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် နေရာအတော်များများမှာ လူတွေက လွဲနေကြတယ်။ ထိပ်တန်းကို ရောက်နေသူတွေ မရှိတော့မှ ကိုယ် ထိပ်တန်းကို တက်နိုင်မယ် ထင်ပြီး ထိပ်က လူတွေကို ထိုးနှက်ဖို့၊ ဖိနှိပ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြတယ်။
အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းမှာလဲ ဒါမျိုးတွေ တွေ့ရတာပဲ။ အဆင့်တစ်ကို ပျက်စီးသွားအောင်၊ ကျောင်းစာမှာ လစ်ဟင်းသွားအောင် ချောက်ချရင်လည်း ချတတ်ကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်က တခြား မသမာတဲ့ တနည်းနည်းနဲ့ အဆင့်တစ် နေရာကို လုဖို့ အားထုတ်ရင်လည်း ထုတ်တတ်ကြပြန်တယ်။
တကယ်က လူတစ်ဦးစီမှာ ကိုယ့်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ။ ကိုယ့်ပင်ကိုအစွမ်းအစနဲ့ ကိုယ်ပါ။ အဆင့်တစ် ဖယ်ပေးလိုက်ပေမယ့်၊ အဆင့်တစ် မရှိတော့ပေမယ့် အဆင့်တစ် ဖြစ်လာ/မလာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ အစွမ်းပေါ်မှာပဲ တည်ပါတယ်။
သူတစ်ပါးကို နင်းပြီး တက်လာတဲ့သူကို ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့သူလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ အဆင့်တက်လာခဲ့သည့်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း လေးစားလို့ မရ၊ တန်ဖိုးထားလို့ မရ ဖြစ်နေတတ်တယ်။
ဒါကို လူငယ်လေးတွေ သိပ် သတိထားကြစေချင်လှပါ တယ်။
ဘဝကို လိပ်ပြာသန့်သန့်၊ သိက္ခာရှိရှိ၊ တန်ဖိုးပြည့်ပြည့်နဲ့ ထူထောင်ထားပါမှ အောင်မြင်မှုကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပိုင်ပိုင် ရလာတဲ့အခါမှာ အဲဒီ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ အရသာကို တင်းပြည့် ကျပ်ပြည့် ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ အောင်တော့ အောင်မြင်ပါရဲ့၊ စိတ်ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး စနောင့်စနင်း ဖြစ်နေရပြီး အဲဒီ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာ မပျော်ပိုက်နိုင်အောင် ဖြစ်နေဖို့က သေချာသလောက်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် အိုင်း(န်)စတိုင်း(န်)က ပြောခဲ့တာပါပဲ။ အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရလာအောင် မကြိုးစားပါနဲ့။ အဲလို ကြိုးစားမယ့်အစား တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပါတဲ့။
သူ့စကားက သိပ်စဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။ သူ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဘဝနဲ့ ယှဉ်ရင် သူဟာ သည်စကားကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ပြောထားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ နိဒါန်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ၂၀ရာစုမှာ အထူးချွန်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးပါ။ အောင်မြင်မှုအရာမှာ ရာစု တစ်ခုစာတောင် အောင်မြင်တာမို့ သိပ်ကို ကြီးကျယ်လွန်းတယ်။ ပြီးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ လူသား အားလုံးထဲမှာ တစ်ရာစု တစ်ယောက် ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ တာမို့ သူ့အောင်မြင်မှုဟာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမီနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုမျိုးပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကို အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီးရိုးရှီးမားနဲ့ နာဂါဆာကီ မြို့ကြီးနှစ်မြို့ကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြာကျသွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အဏုမြူ ဗုံးလေး နှစ်လုံးဟာ သူ့ရဲ့အထက်က ဆိုခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုများရဲ့ အသီးအပွင့်တွေပါ။ ဒါတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်လိုက်ရတဲ့ အိုင်း(န်)စတိုင်း(န်)ဟာ သူ့အောင်မြင်မှုအတွက် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါ့မလား။ သူ့ကိုယ်သူ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်လို့မှ ရပါ့မလား။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများလည်း စဉ်းစားပါ။
အောင်မြင်မှုရအောင် ကြိုးစားမလား။ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမလား။ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
(၂၀ဝ၄ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးတာလေးကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။)
This entry was posted in Discussion, Reproduction by lettwebaw. Bookmark the permalink.
3 thoughts on “Success and Value”
Aung Chan Thar on9September 2010 at 11:13 pm said:
ဆရာရေ… အမေ့အိမ်နဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ တချိန်က အမေ ကျွန်တော့်ကို သွန်သင်ခဲ့တဲ့ ဆုံးမစကားတွေအတိုင်း ဆရာ့ဆီက ပြန်ကြားရလို့… ကျွန်တော် လွတ်နေတဲ့ ဆုံးမစကားတွေ ပြန်ကြားရသလို ခံစားရပါတယ်။
ဆရာ့ကိုလဲ ဒီလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
မိုးကြီး on 12 September 2010 at 7:55 pm said:
ယိမ်းယိုင်သွားစေနိုင်တဲ့ စိတ်ကိုပြန်လည်သတိဝင်လာအောင် ဆုံးမပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…….ဆရာ….
Hlwam Moe Aung on 22 October 2016 at 10:04 pm said:
လိပ်ပြာမလုံပဲနဲ့ ရတဲ့ အောင်မြင်မှု ဆိုတာကြီးတော့ မလိုချင်ဘူး ဆရာ ကျေးဇူးပါ